တစ်သောင်းတန်မကိုင်ဖူးတဲ့ဘဘကို တစ်သောင်းတန်တွေ အထပ်လိုက် လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ မိုးစက် –7Day Daily News
တစ်သောင်းတန်မကိုင်ဖူးတဲ့ဘဘကို တစ်သောင်းတန်တွေ အထပ်လိုက် လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ မိုးစက်
January 12, 2022 T AK Celebrity News 0
လူရွှင်တော်မိုးစက် ကတော့ လတ်တလော နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အချိန်ကာလတွေမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ မိသားစုတွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကူညီလှူဒါန်းမှုတွေ လုပ်ပေးပြီး မွန်မြတ်တဲ့ ပရဟိတအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အလှူလေးတွေမှာ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ကနေ စေတနာရှင်များရဲ့ လှူဒါန်းမှုတွေနဲ့ အတူ လှူဒါန်းထောက်ပံ့ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေ ထပ်တူသာဓုခေါ်နိုင်အောင် အမြဲဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။
အနုပညာရှင်တွေသာမက အဆင်မပြေတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေကိုတွေ့ရင်လည်း အမြဲတမ်း တတ်စွမ်းသလောက်ကူညီခဲ့တဲ့ စေတနာကောင်းသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ တစ်သောင်းတန်မမြင်ဖူးတဲ့ ဘဘကိုတစ်သောင်းတန်တွေ လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ မိုးစက်ရဲ့သတင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ “ဒီနေ့ ၄၀၀ ဖိုးတော့ ရောင်းရပြီ… ဟုတ်လား…နေတောင်အတော်မြင့်နေပြီ အဘရယ်…တစ်ခါတစ်လေ စျေးဦးတောင်မပေါက်ဘူး…ဒါပေမယ့် ဒီနားက လူတွေက ထမင်းကျွေးပါတယ်… တော်ပါသေးရဲ့ အဘရယ်…(အဘက နားအရမ်းလေးပြီးစကားလဲ မပီတော့ပါဘူး အဆင်ပြေအောင် စာကိုရေးပေးထားတာပါ
ဒါနဲ့ အဘရောင်းတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ…အနှစ် (၂၀) ရှိပြီ… သြော်… တော်တော်တောင်ကြာပြီဘဲ သားလဲအားပေးပါမယ် ၊ ဘီးလေးနဲ့ ကပ်ကြေးအသေးလေးက ဘယ်လောက်လဲ အဘ.. ဘီး က ၂၀၀ ၊ ကပ်ကြေးက ၈၀၀…နှစ်ခုလုံးအားပေးမယ်လေ အဘ လျော့ပေးပါဦး…၉၀၀ ဘဲ ပေးပါနော်…ဟုတ်ကဲ့ အဘ ၊ ရော့ ၉၀၀ ဒါ ၉၀၀ ဟုတ်လား…??? မဟုတ်ပါဘူး ထောင်ကျော်နေပြီ…၁၀၀၀ တန်တွေလား…(အခုတလော တစ်သောင်းတန်သိပ်မကိုင်ဖူးတဲ့ အဖိုးအဖွားတွေ တွေ့မြင်နေရတယ်ဗျာ…)
မဟုတ်ပါဘူး အဘရဲ့ ဒါ တစ်သောင်းတန်ပါ ၊ ၁၀ရွက်ဆိုတော့ တစ်သိန်းကျပ်ပါ အဘ… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…သားရယ်…အဘနာမည်က ဦးဟုတ်စိန် ၊ အသက်က (၇၅) နှစ်နားလေးတဲ့အပြင် စကားတွေလဲ မပီတော့ပါဘူး။ အဘရောင်းတာလေးတွေအားပေးချင်ရင် တောင်ဒဂုံ ၊ (၅၃) စျေး ၊ သမထိပ် မှာ ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဘ က မနက် (၁၁) နာရီဝန်းကျင်လောက်အထိဘဲ ရောင်းချပါတယ်။အခုလိုအဖိုးအဖွားတွေ တွေ့မြင်တဲ့အခါမှာ ၊လှူဒါန်းခွင့်ရအောင် ကျွန်တော်နဲ့အတူ ပါဝင်လှူဒါန်းကြသူများ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ” လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ … လူရွှင်တော် မိုးစက် ကလူတွေကို ပျော်ရွှင်အောင် လူရွှင်တော်အဖြစ်ဖျော်ဖြေပေးသလို ခက်ခဲနေတဲ့ဘဝတွေကိုလည်း စာနာစိတ် တစ်ခုတည်းနဲ့ ဖေးမပေးတတ်တဲ့ ပရဟိတသမားကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ ပြည်သူတွေကို ရယ်မောစရာအပြင် အကူအညီတွေပါ ပေးတတ်သူမို့ တကယ်ကိုလေးစားစရာကောင်းပါတယ်။ ကိုမိုးစက်ရဲ့အလှူလေးကို သာဓုခေါ်ဆိုခဲ့ပါအုန်း ပရိသတ်ကြီးရေ…။
လူ႐ႊင္ေတာ္မိုးစက္ ကေတာ့ လတ္တေလာ နိုင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႕ ကိုဗစ္ေရာဂါကူးစက္မႈျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလေတြမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ မိသားစုေတြကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန ကူညီလႉဒါန္းမႈေတြ လုပ္ေပးၿပီး မြန္ျမတ္တဲ့ ပရဟိတအလုပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕အလႉေလးေတြမွာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ကေန ေစတနာရွင္မ်ားရဲ႕ လႉဒါန္းမႈေတြနဲ႕ အတူ လႉဒါန္းေထာက္ပံ့ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြကိုလည္း ပရိသတ္ေတြ ထပ္တူသာဓုေခၚနိုင္ေအာင္ အၿမဲေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။
အႏုပညာရွင္ေတြသာမက အဆင္မေျပတဲ့အိမ္ေထာင္စုေတြကိုေတြ႕ရင္လည္း အၿမဲတမ္း တတ္စြမ္းသေလာက္ကူညီခဲ့တဲ့ ေစတနာေကာင္းသူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႕မွာေတာ့ တစ္ေသာင္းတန္မျမင္ဖူးတဲ့ ဘဘကိုတစ္ေသာင္းတန္ေတြ လႉဒါန္းလိုက္တဲ့ မိုးစက္ရဲ႕သတင္းေလးကို တင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ “ဒီေန႕ ၄၀၀ ဖိုးေတာ့ ေရာင္းရၿပီ… ဟုတ္လား…ေနေတာင္အေတာ္ျမင့္ေနၿပီ အဘရယ္…တစ္ခါတစ္ေလ ေစ်းဦးေတာင္မေပါက္ဘူး…ဒါေပမယ့္ ဒီနားက လူေတြက ထမင္းေကြၽးပါတယ္… ေတာ္ပါေသးရဲ႕ အဘရယ္…(အဘက နားအရမ္းေလးၿပီးစကားလဲ မပီေတာ့ပါဘူး အဆင္ေျပေအာင္ စာကိုေရးေပးထားတာပါ
ဒါနဲ႕ အဘေရာင္းတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ…အႏွစ္ (၂၀) ရွိၿပီ… ေၾသာ္… ေတာ္ေတာ္ေတာင္ၾကာၿပီဘဲ သားလဲအားေပးပါမယ္ ၊ ဘီးေလးနဲ႕ ကပ္ေၾကးအေသးေလးက ဘယ္ေလာက္လဲ အဘ.. ဘီး က ၂၀၀ ၊ ကပ္ေၾကးက ၈၀၀…ႏွစ္ခုလုံးအားေပးမယ္ေလ အဘ ေလ်ာ့ေပးပါဦး…၉၀၀ ဘဲ ေပးပါေနာ္…ဟုတ္ကဲ့ အဘ ၊ ေရာ့ ၉၀၀ ဒါ ၉၀၀ ဟုတ္လား…??? မဟုတ္ပါဘူး ေထာင္ေက်ာ္ေနၿပီ…၁၀၀၀ တန္ေတြလား…(အခုတေလာ တစ္ေသာင္းတန္သိပ္မကိုင္ဖူးတဲ့ အဖိုးအဖြားေတြ ေတြ႕ျမင္ေနရတယ္ဗ်ာ…)
မဟုတ္ပါဘူး အဘရဲ႕ ဒါ တစ္ေသာင္းတန္ပါ ၊ ၁၀႐ြက္ဆိုေတာ့ တစ္သိန္းက်ပ္ပါ အဘ… ေက်းဇူးတင္ပါတယ္…သားရယ္…အဘနာမည္က ဦးဟုတ္စိန္ ၊ အသက္က (၇၅) ႏွစ္နားေလးတဲ့အျပင္ စကားေတြလဲ မပီေတာ့ပါဘူး။ အဘေရာင္းတာေလးေတြအားေပးခ်င္ရင္ ေတာင္ဒဂုံ ၊ (၅၃) ေစ်း ၊ သမထိပ္ မွာ ဝယ္ယူအားေပးနိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။အဘ က မနက္ (၁၁) နာရီဝန္းက်င္ေလာက္အထိဘဲ ေရာင္းခ်ပါတယ္။အခုလိုအဖိုးအဖြားေတြ ေတြ႕ျမင္တဲ့အခါမွာ ၊လႉဒါန္းခြင့္ရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္နဲ႕အတူ ပါဝင္လႉဒါန္းၾကသူမ်ား ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ” လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။
ပရိသတ္ႀကီးေရ … လူ႐ႊင္ေတာ္ မိုးစက္ ကလူေတြကို ေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္ လူ႐ႊင္ေတာ္အျဖစ္ေဖ်ာ္ေျဖေပးသလို ခက္ခဲေနတဲ့ဘဝေတြကိုလည္း စာနာစိတ္ တစ္ခုတည္းနဲ႕ ေဖးမေပးတတ္တဲ့ ပရဟိတသမားေကာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ႕ ျပည္သူေတြကို ရယ္ေမာစရာအျပင္ အကူအညီေတြပါ ေပးတတ္သူမို႔ တကယ္ကိုေလးစားစရာေကာင္းပါတယ္။ ကိုမိုးစက္ရဲ႕အလႉေလးကို သာဓုေခၚဆိုခဲ့ပါအုန္း ပရိသတ္ႀကီးေရ…။
သူ့ရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ ချစ်သူကောင်မလေး ဒီးဆီမှ တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့ လက်ဆောင်တွေအများကြီးရရှိခဲ့လို့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ မော်ဒယ် ချာလီ
Omicron ကူးစက်ခံလိုက်ရပြီး ရောဂါကိုတစ်ယောက်တည်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Sophia Everest
ချစ်မေမေကို ထူးထူးခြားခြားလေး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် မေကဗျာ
ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံလေးကြောင့် နာမည်ကြီးနေတဲ့ Pee Nak ဇာတ်လမ်းထဲက ကိုရင်လေး နော့
အာရုံကြော‌ရောဂါ ခံစားနေရကာ စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ရတဲ့ မေတင်မောင်ဆန်း၀င်း
သားလေးပြန်လွတ်လာမယ့်နေ့က ဘ၀မှာ အပျော်ဆုံးနေ့ပဲလို့ပြောလာတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့မိခင်
စစ်ရှောင်စခန်းမှ ညီအစ်မတွေအတွက် အားပေးစကားပြောခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေနဲ့ မြနှင်းရည်လွင်